အချိန်တိုအတွင်းရန်းဂ်နစ်ထံမှ ကြီးကြီးမားမားမျှော်လင့်မထားရန်မန်ယူအသင်းကိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တဲ့ ဂွာဒီယိုလာ - Myanmar Man United.
မန်ယူအသင်းသည် ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းက ဂျာမန်ဘောလုံးလောကရဲ့ ခေါင်းကိုင်ဖခင်ကြီးဖြစ်သူ ရန်းဂ်နစ်အား ယာယီမန်နေဂျာအဖြစ် ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မန်ယူအသင်းရဲ့ခေါ်ယူမှုကြောင့် အားလုံးကအံ့အားသင့်ခဲ့ရပြီး နည်းပြသစ်ရဲ့ပွဲထွက်လာမယ့်အပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုအရှိန်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ရန်းဂ်နစ်၏ နည်းစနည်ပိုင်းအတွေ့ကြုံနှင့် လူငယ်စီမံကိန်းတွေကြောင့်မန်ယူအသင်းတွင်များစွာသော အကျိုးမြတ်ရလိမ့်မယ်လို့မန်ယူအသင်းကလဲမျှော်လင့်နေပါတယ်။သို့ပေမယ့် ဂွာဒီယိုလာက မန်ယူကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် ရန်းနစ်အနေဖြင့် အချိန်ယူရန် လိုအပ်ကြောင်း သတိပေးပြောဆိုလိုက်သည်။
အသက် ၆၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ရန်းနစ်သည် လာမည့်တစ်ပတ်မှစ၍ အိုးထရက်ဖို့တွင်ယာယီမန်နေဂျာအဖြစ် ရာသီကုန်သည်အထိ ဆက်လက်တာဝန်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်တွင် အကြံပေးအဖြစ် မန်ယူ၌ ၂ နှစ် ဆက်နေသွားမည်ဖြစ်သည်။ရန်းနစ်သည် ယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီ အဆုံးပိုင်းတွင် မန်ယူ အခြေအနေကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ချက်ထားခြင်း ခံနေရသည်။ ဂွာဒီယိုလာက အချိန်တိုအတွင်း ကြီးမားသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရန် ရန်းနစ် လုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ချက်ထားခြင်းမှာ အမြော်အမြင် နည်းရာရောက်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
ပရီးမီးယားလိဂ် ကစားဟန်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အသားကျရန် အချိန်ယူရမည်လားဟု မေးမြန်းရာ ဂွာဒီယိုလာက “ကစားသမားတွေကို သိဖို့ရယ်၊ ကစားသမားတွေက မန်နေဂျာ ကစားစေချင်တာကို နားလည်ဖို့ရယ်က အချိန်လိုပါတယ်။ သူတို့ မြန်မြန်နားလည်ရင်တော့ ကောင်းပါတယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ နောက်တစ်ကြိမ် အလုပ်ထုတ်ခံရတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ မန်စီးတီးကို ကျွန်တော် စလာတော့ ဘာလုပ်ရမလဲ တွေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်အောင် လုပ်ရတာပါပဲ”
“လူတွေက ချက်ချင်းအောင်မြင်ချင်ကြတယ်။ အဲဒါက မလွယ်ပါဘူး။ အချိန်ယူဖို့လိုတယ်။ အချိန်ယူပြီး တည်ဆောက်ထားတာမဟုတ်တဲ့ အောင်မြင်မှုကရေရှည်မတည်တံ့နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မန်နေဂျာတွေအတွက် အောင်မြင်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေးက အခက်ခဲဆုံးပါ”ဟု ပြောသည်။ဂွာဒီယိုလာသည် မန်စီးတီးနှင့်အတူ ပြည်တွင်းဆုဖလားပေါင်း ၁၀ လုံး ရရှိထားသောကြောင့် အင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကနှင့် အသားကျနေပြီဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း သူ၏ပထမဆုံးရာသီတွင်မူ အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
အခြိနျတိုအတှငျးရနျးဂျနဈထံမှ ကွီးကွီးမားမားမြှျောလငျ့မထားရနျမနျယူအသငျးကိုသတိပေးပွောဆိုလိုကျတဲ့ ဂှာဒီယိုလာ
မနျယူအသငျးသညျ ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးအတှငျးက ဂြာမနျဘောလုံးလောကရဲ့ ခေါငျးကိုငျဖခငျကွီးဖွဈသူ ရနျးဂျနဈအား ယာယီမနျနဂြောအဖွဈ ချေါယူနိုငျခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျ။မနျယူအသငျးရဲ့ချေါယူမှုကွောငျ့ အားလုံးကအံ့အားသငျ့ခဲ့ရပွီး နညျးပွသဈရဲ့ပှဲထှကျလာမယျ့အပျေါမှာစိတျဝငျစားမှုအရှိနျမွငျ့တကျလာခဲ့ပါတယျ။ရနျးဂျနဈ၏ နညျးစနညျပိုငျးအတှကွေုံ့နှငျ့ လူငယျစီမံကိနျးတှကွေောငျ့မနျယူအသငျးတှငျမြားစှာသော အကြိုးမွတျရလိမျ့မယျလို့မနျယူအသငျးကလဲမြှျောလငျ့နပေါတယျ။သို့ပမေယျ့ ဂှာဒီယိုလာက မနျယူကို ကိုငျတှယျရာတှငျ ရနျးနဈအနဖွေငျ့ အခြိနျယူရနျ လိုအပျကွောငျး သတိပေးပွောဆိုလိုကျသညျ။
အသကျ ၆၃ နှဈအရှယျရှိ ရနျးနဈသညျ လာမညျ့တဈပတျမှစ၍ အိုးထရကျဖို့တှငျယာယီမနျနဂြောအဖွဈ ရာသီကုနျသညျအထိ ဆကျလကျတာဝနျယူမညျဖွဈသညျ။ ထို့နောကျတှငျ အကွံပေးအဖွဈ မနျယူ၌ ၂ နှဈ ဆကျနသှေားမညျဖွဈသညျ။ရနျးနဈသညျ ယခုနှဈဘောလုံးရာသီ အဆုံးပိုငျးတှငျ မနျယူ အခွအေနကေောငျးအောငျ ဆောငျရှကျပေးသှားနိုငျမညျဟု မြှျောလငျ့ခကျြထားခွငျး ခံနရေသညျ။ ဂှာဒီယိုလာက အခြိနျတိုအတှငျး ကွီးမားသညျ့ အကြိုးသကျရောကျမှုရရှိရနျ ရနျးနဈ လုပျနိုငျလိမျ့မညျဟု မြှျောလငျ့ခကျြထားခွငျးမှာ အမွျောအမွငျ နညျးရာရောကျကွောငျး ထုတျဖျောပွောဆိုလိုကျသညျ။
ပရီးမီးယားလိဂျ ကစားဟနျနှငျ့ပတျသကျပွီး အသားကရြနျ အခြိနျယူရမညျလားဟု မေးမွနျးရာ ဂှာဒီယိုလာက “ကစားသမားတှကေို သိဖို့ရယျ၊ ကစားသမားတှကေ မနျနဂြော ကစားစခေငျြတာကို နားလညျဖို့ရယျက အခြိနျလိုပါတယျ။ သူတို့ မွနျမွနျနားလညျရငျတော့ ကောငျးပါတယျ။ မဟုတျရငျတော့ နောကျတဈကွိမျ အလုပျထုတျခံရတာမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျတယျ။ မနျစီးတီးကို ကြှနျတျော စလာတော့ ဘာလုပျရမလဲ တှေးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခကျခဲဆုံးအပိုငျးက တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ နားလညျအောငျ လုပျရတာပါပဲ”
“လူတှကေ ခကျြခငျြးအောငျမွငျခငျြကွတယျ။ အဲဒါက မလှယျပါဘူး။ အခြိနျယူဖို့လိုတယျ။ အခြိနျယူပွီး တညျဆောကျထားတာမဟုတျတဲ့ အောငျမွငျမှုကရရှေညျမတညျတံ့နိုငျပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ မနျနဂြောတှအေတှကျ အောငျမွငျမှုကို ထိနျးသိမျးနိုငျရေးက အခကျခဲဆုံးပါ”ဟု ပွောသညျ။ဂှာဒီယိုလာသညျ မနျစီးတီးနှငျ့အတူ ပွညျတှငျးဆုဖလားပေါငျး ၁၀ လုံး ရရှိထားသောကွောငျ့ အင်ျဂလနျဘောလုံးလောကနှငျ့ အသားကနြပွေီဟု ဆိုနိုငျသျောလညျး သူ၏ပထမဆုံးရာသီတှငျမူ အခကျအခဲမြားနှငျ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရသညျ။
မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွက် တင့်ကားတွေနဲ့ အမြောက်ကြီးတွေ သုံးသွားမည်ဟု အီသီယိုပီးယား စစ်တပ် သတိပေး ( အရပ်သားတွေ ရှိတဲ့နေရာမှာ တင့်ကားတွေ အမြောက်ကြီးတွေသုံးမှာဆိုတော့ အီသီယိုပီယားက ဒီကမှာထက် ဆိုးနေပြီ….)
တန်ဖိုးသိသူရဲ့လက်အောက်မှာ အမိုက်စားခြေစွမ်းပြနေပြီးချီးကျူးခံနေရတဲ့ ဗန်ဒိဘိခ်